Poor Record Keeping Hurts SMEs’ Chances of Getting Loans | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalPoor Record Keeping Hurts SMEs’ Chances of Getting Loans
Local small and medium enterprises are having difficulties getting loans as they cannot provide adequate data about their business, said Yangon Chief Minister U Phyo Min Thein ataDecember 8 monthly meeting between business leaders and the Vice President of Myanmar.
Most SMEs are not registered and do not keep records of tax payments and annual profit and losses.
“While surveying the conditions of SMEs, we found that onlyafew could provide complete statistics,” said the chief minister. “Financial Institutions have enough cash but borrowers cannot provide all the necessary documents, so loans cannot be granted.”
To tackle this issue, the Yangon Regional Government is planning to ask the Japan International Cooperation Agency (JICA), the largest provider of loans to Myanmar SMEs, to relax its credit requirements. SMEs have different credit needs; some need loans to purchase machineries while others borrow to fund their operations.
Currently, the Union and regional governments are working onamasterplan to provide SME loans through SME agencies.
U Phyo Min Thein pointed out that SMEs should transform their business model from an informal, family-run business toaformal one.
“[SMEs] always complain about not getting loans, but the reason they can’t get loans is actually because they cannot provide sufficient documentation to meet the requirements set by JICA,” said U Zaw Min Win, president of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI). “SMEs are very important for the development of the country.”
To be eligible for SME loans, applicants must be between the ages of 20 and 60 and their business must haveatrack record of at least two years.
The government has provided K30 billion in collateral loans and K7.393 billion in credit guarantee insurance (CGI) loans to SMEs while JICA has provided an additional 20 billion yen; the Myanma Economic Zone, K200 billion; and the German Corporation of International Cooperation (GIZ), 15.3 million euros.
Currently, there are 73,000 registered SMEs in Myanmar, but the total number of SMEs nationwide is believed to be much higher.
ပြည်တွင်းရှိ အသေးစား အလတ်စား (SMEs) လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ကာ စာရင်းအချက်အလက်များ တင်ပြနိုင်မှှု အားနည်းခြင်းများကြောင့် ချေးငွေများ ထုတ်ပေးရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောလိုက်သည်။ လုပ်ငန်းအများစုသည် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားမှှု အားနည်းခြင်း ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း နှစ်အလိုက် ပေးဆောင်ထားသည့် အခွန်အခများ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားမှှုမရှိခြင်း ၊ နှစ်စဉ် အရှုံးအမြတ် များကို စနစ်တကျ ပြုလုပ်ထားမှှုမရှိုခြင်းများကြောင့် ချေးငွေရရန်ခက်ခဲနေသည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလတုန်းက ချေးငွေပေးဖို့ လေ့လာတဲ့ အခြေအနေမှာ ပြည့်စုံစွာတင်ပြနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ နည်းနေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ပိုက်ဆံတွေက ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် လာချေးတဲ့သူရဲ့ တင်ပြတဲ့ အချက်အလက်တွေက မပြည့်စုံဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ချေးမရဘူး ဖြစ်နေတယ် ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ချေးငွေကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်ကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေဖြင့် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းရေးအေဂျင်စီ JICA နှင့် သီးသန့်ဆွေးနွေးမှှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ JICA သည် မြန်မာပြည်ရှိ အသေးစားအလတ်စာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေကို အစိုးရဘဏ်များမှတဆင့် ထုတ်ချေးလျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လည်းဖြစ်သည်။ ချေးငွေယူ လိုသူအချို့သည် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေများကိုထည့်ဝင်ရခြင်း ၊ အချို့သော လုပ်ငန်းများသည် လှည့်ပတ်ငွေအဖြစ် အသုံးပြုလိုခြင်း စသဖြင့် ချေးယူလိုသည့်ရည်ရွယ်ချက် မတူညီကြပေ။
လက်ရှိတွင် SME လုပ်ငန်းများကို ချေးငွေများထုတ်ပေးသည့် SME အေဂျင်စီများ မှတဆင့် ချေးငွေထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများ Master Plan များ ရေးဆွဲနိုင်ရေး ညှိနှှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။ SME လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း ယခင်ကဲ့သို့ မိသားစုစီးပွားရေး တစ်ခုအနေဖြင့် မဆောင်ရွက်သင့်တော့ဘဲ စနစ်တကျဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြခဲ့သည်။
“ SME လုပ်ငန်းတွေက ချေးငွေမရဘူးပဲ အမြဲတမ်းပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် တင်ပြချက်တွေ လိုအပ်ချက်တွေကလည်း အများကြီးရှိနေတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ JICA ရဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကလည်း အများကြီး ရှိတာကို မလိုက်နာနိုင်တဲ့ အနေထားဖြစ်နေတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုုးတိုးတက်မှလည်း နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးက တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု UMFCCI ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းက ပြောသည်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ချေးငွေလျှောက်ထားမည်ဆိုပါက ချေးယူလိုသူသည် အသက် ၂၀ မှ ၆၀ အထိ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းတွင် အနည်းဆုံး ၂ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစား၊အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချေးငွေ ကျပ် ၃၀ ဘီလီယံ ၊ အပေါင်မဲ့ အာမခံစနစ် CGI ဖြင့် ကျပ် ၇ ဒသမ ၃၉၃ ဘီလီယံ ၊ JICA မှ ဂျပန်ယန်း ဘီလီယံ ၂၀ ၊ မြန်မာစီးပွား ရေးဘဏ်မှ ကျပ် ၂၀၀ ဘီလီယံ နှင့် ဂျာမန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ယူရို ၁၅ ဒသမ ၃ သန်း ထုတ်ချေးထားကြောင်း သိရသည်။ စက်မှှုဝန်ကြီးဌာနတွင် လုပ်ငန်းပေါင်း ခုနှစ်သောင်းသုံးထောင်ကျော်မှ SME လုပ်ငန်းများအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ယင်းအရေအတွက်ထက် လက်ရှိလည်ပတ်နေသည့် လုပ်ငန်းသည်ပိုများသည်။
Previous articleJapanese Shares Dip as Investors Await Clarity on U.S. Tariffs
Next articleMyanmar to Deploy Navy to Fight Illicit Trade